झिवाखोलामा संचालित राजमोको सैद्धान्तिक राजनीतिक प्रशिक्षणको समापन आज ! – ebaglung.com
२०७४ फाल्गुन १४, सोमबार ०६:११	Top News, थप समाचार
मिलन हमाल, बुर्तिबाङ २०७४ फागुन १४ । निसीखोला गाउँपालिकाको बोहरागाउँमा आईतवार देखि राष्ट्रिय जनमोर्चाकोे सैद्धान्तिक राजनीतिक प्रशिक्षण शुरु भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा निसीखोला गाउँपालिकाको आयोजनामा शुरु भएको प्रशिक्षणमा केन्द्रिय स्तरका नेताहरुले प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ।
प्रशिक्षण कार्यक्रमको आईतवार अन्तराष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष गंगा पौडेलले मैन बत्ती बालेर उद्घाटन गरेका थिए।
उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पौडेलले पार्टीलाई बलियो र विश्वासिलो बनाउन गाउँदेखि केन्द्र सम्मको संगठनात्मक संरचना नै क्रियाशिल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले पार्टी संख्याको दृष्टिले भन्दा पनि सिद्धान्तको दृष्टिले मजबुत हुन आवश्यकता रहेको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय प्रशिक्षक दुर्गानाथ खरेल, नरबहादुर पुन, राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङका सदस्य गौरीश्वर पाण्डे, वडा नं. ३ का वडाअध्यक्ष जुनविक्रम शाही लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
प्रशिक्षणको पहिलो दिन केन्द्रिय प्रशिक्षक दुर्गानाथ खरेलले प्रारम्भिक कम्युनिष्ट शिक्षा र अर्का प्रशिक्षक नरबहाुदर पुनले भौतिकबादी चेतनाको बारेमा प्रशिक्षण दिएका थिए । आज सोमबार समसामयिक राजनैतिक परिस्थिती र संगठनात्मक कार्यप्रणाली र अनुशासनको बारेमा प्रशिक्षण दिइने बताइएको छ ।
प्रशिक्षणमा निसीखोला गाउँपालिकामा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट विभिन्न भातृसंगठनमा आस्था राख्ने ८० जना कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रम राष्ट्रिय जनमोर्चा निसीखोला गाउँपालिका इन्चार्ज खिमविक्रम शाहीको अध्यक्षता, जिल्ला सदस्य थम्मन घर्तिमगरको स्वागत मन्तव्य र ढालेन्द्र हमालको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।